Wacaal Daray ah:Dekedda Bosaaso oo caawa si rasmi ah u shaqo bilowday – Radio Daljir
Wacaal Daray ah:Dekedda Bosaaso oo caawa si rasmi ah u shaqo bilowday
Noofember 2, 2017 3:37 g 1
Ilaa iyo lix doonyood oo ganacsi ayaa caawa kusoo xirtay dekedda Bosaso oo hakad uu ku jiray shaqadeeda muddo ka badan todobo cisho, waxaana laba ka mid ah doonyaha ay yihiin kuwa xoollaha nool ka qaadaya, afar ka mid ahna waa doonyo badeecado kale duwan ku raranyihiin oo ka yimid wadanka Imaaraatka Carabta.
Wasiiro katirsan dowladda Puntland, ganacsato iyo maamulka gobolka Bari ayaa hadda kusugan dekedda oo la filayo inay warbaahinta ay sitoos ah ula hadlaan.
Heshiis ku meel gaar ah oo ganacsatada iyo dowladda dhexmaray maanta ayaa waxaa lagu gaaray inay dowladda ay bixiso qayb ka mid lacagta laga rabo ganacsatada muddo todobaad ah, lacagtaasi oo lagu wareejinayo shirkadda P & O Ports.
Mudada dekedda ay xirnayd ayaa saameyn ku yeelatay ganacsigii kale duwanaa ee kasocday Puntland iyo gobolada kalle ee u dhow, gaadiidka badeecadaha qaada iyo dadka ka shaqaysan jiray dekedda oo noloshoodu ku tiirsanayd dejinta iyo raridda alaabaha dekedda imaanayay.
Warka Fiidnimo iyo Zubayr Shiikh Cabdi, Daljir Gaalkacyo (dhegayso)
Axmed Madoobe: “Xildhibaanada faderaalka hatagaan deegaanada laga soo doortay” (sawiro)
Mohamed Dahir 12 months
Good radio dalji